Manchester City oo ku iibsaneysa Toni Kroos lacag gaareysa £50m – Africa Sports Network
Jul 21, 2016 WARARKA 0 827 Views By Tajuddin
Manchester, United Kingdom ( AFRICASPORTS.NET) – Sida laga soo xigtay warbixinno, Manchester City waxa ay bixin doontaa lacag dhan £50m si ay ula soo wareegto cayaaryahanka khadka dhexe uga cayaara kooxda Real Madrid ee la yiraahdo Toni Kroos.
Tababaraha cusub ee kooxda Manchester city Pep Guardiola ayaa tilmaamay inuu aad u daneynayo cayaartoygaasi oo u dhashay dalka Germany oo hore uga tirsanaan jiray kooxda Bayern Munich, balse Real Madrid ay ku iibsatay sanadkii 2014 lacag dhan £24m .
Sida uu qoray Wargeyska “The Mirror” Manchster City weli si rasmi ah uma cadeyn la soo wareegidda Kroos, oo todobaad waliba ka hela kooxda uu ka tirsan yahay ee ka dhisan dalka Spain lacag gaareysa £90,000.
Real Madrid ayaa ku fikireysa inay iibiso mid ka mid ah xidigaheeda ugu waa weyn , si lacagta ka soo baxda ay u geliso suuqa kala iibsiga, lana soo wareegto cayaaryahanno kale oo cusub .
Dhinaca kale, Indhaha ugu badan xilligan waxa ay saaran yihiin cayaaryahanka u dhashay dalka France, una cayaara kooxda Juventus ee ka dhisan Magaalada Turin ee dalka Italy, ninka lagu magacaabo Paul Pogba oo lagu rabo qiimo lacageed oo dhan £100m .
Bayern Munich, France, Germany, Italy, Juventus, Manchester City, Paul Pogba, Pep Guardiola, Real Madrid, Spain, Toni Kroos, Turin
Sam Allardyce oo la filayo in loo magacaabo tababarnimada xulka kubadda cagta England José Mourinho oo sheegay in Zlatan Ibrahimovic isku diyaarinayo xilli cayaareedka soo aadan
José Mourinho oo sheegay in Zlatan Ibrahimovic isku diyaarinayo xilli cayaareedka soo aadan
London, England, United Kingdom (UK ) ( AFRICASPORTS.NET) - Xidigga caalamiga ee kubadda cagta, una dhashay dalka Sweden Zlatan Ibrahimovic...